Tamin'ny taon-dasa, nanoratra lahatsoratra aho ho valin-tenin'i Jonathan Salem Baskin, manalavitra ny fiheverany fa mety hampidi-doza ho an'ny orinasa ny Social Media. (Tena nifanaraka taminy tamin'ny resaka maro aho). Tamin'ity indray mitoraka ity - raha ny hevitro - dia nofantsihan'Atoa Baskin izany. Ny orinasa rehetra dia nitsambikina tamin'ny haino aman-jery sosialy, nampitombo ny vola lany amin'ny varotra amin'io sehatra io, saingy vitsy no mahita ny valiny nantenain'izy ireo. Burger King dia nandrotsaka
Nieritreritra ny hanome anarana ity lahatsoratra ity aho hoe, Maninona i Jonathan Salem Baskin no Diso… fa tena miombon-kevitra aminy aho amin'ny lafiny maro ao amin'ny lahatsorany, The Dangerous Lure of the Social Web. Manaiky aho, ohatra, fa matetika ny mpampianatra haino aman-jery sosialy dia manandrana manosika ireo orinasa hanararaotra ny haino aman-jery nefa tsy azoko tsara ny kolontsaina na ny loharano ao amin'ilay orinasa iarahany. Tsy tokony hahagaga anefa izany. Miezaka mivarotra vokatra… ry zareo
Alarobia, Oktobra 24, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Omaly aho dia nisakafo antoandro niaraka tamin'ny namako akaiky, Bill. Rehefa nihinana ny lasopy tortilla akoho nahafinaritra tao Scotty's Brewhouse izahay, dia niresaka momba izany fotoana tsy nampoizina izany izahay sy i Bill izay niova ho fahombiazana. Heveriko fa ny olona tena manan-talenta dia afaka maka sary an-tsaina ny risika sy valisoa ary manao zavatra mifanaraka amin'izany. Mitsambikina izy ireo amin'ny fotoana mety, na dia tsy voavaha aza ny risika… ary matetika dia mitarika amin'ny fahombiazan'izy ireo izany. Raha very anao aho, mifikira amiko. Ity misy